Ego nanị na OnePlus 5T na Banggood | Gam akporosis
Nweta OnePlus 5T na ego efu na Banggood
Eder Ferreño | | Mobiles, OnePlus
Otu n'ime ngwaọrụ kwụ ọtọ ọdịda a bụ OnePlus 5T. Ọhụrụ dị elu nke akara ahịa China abiala n'ahịa chọrọ iguzogide ndị na-asọmpi ya. Ọ bụ ngwaọrụ nwere ụdịdị dị ike nakwa na o nwere ihe ọ bụla ọ na-ere nke ọma. Na mgbakwunye na nwere ọnụ ala karịa ọtụtụ ekwentị dị elu Site na ahịa.
Ma nke a enwere ike ịhụ ọnụahịa ọbụlagodi maka ekele maka nkwalite a na Banggood. Lọ ahịa a ma ama na-ewetara anyị OnePlus 5T nwere ego efu n'ụdị ya abụọ. Agbanyeghị, nke a bụ nkwalite dị oke. Anyị ga-agwa gị otu ị ga - esi rite uru na ya n'okpuru!
Dị ka ọtụtụ n'ime gị mara, a tọhapụrụ abụọ nsụgharị site na ngwaọrụ gaa n'ahịa. Otu n'ime ha na 6 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa n'ime. Mgbe nke ọzọ nwere 8 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa n'ime. Ha abụọ dị. Ugbu a, Banggood na-ewetara anyị ego na ụdị abụọ a nke OnePlus 5T.
1 OnePlus 5T (8 GB Ram - 128 GB Nchekwa) - Ego $ 53,6
2 OnePlus 5T (6 GB Ram - 64 GB Nchekwa) - Ego $ 50,49
OnePlus 5T (8 GB Ram - 128 GB Nchekwa) - Ego $ 53,6
Ihe mbu nke uzo abuo nke ngwaọrụ na nkwalite bu nke nwere a ụba RAM na ikike nchekwa dị n'ime. Versiondị nke OnePlus 5T a dị mma maka ndị na-achọ ekwentị dị ike ma nwee ohere ọzọ maka onyonyo ma ọ bụ vidiyo. Ya mere ọ bụrụ na ị bụ ndị ọrụ na-eji ekwentị were ọtụtụ foto ma ọ bụ lelee usoro, Ọ bụ doro anya na ezigbo nhọrọ nzọ na a version.
El Ọnụahịa mbụ nke ụdị a nke OnePlus 5T bụ $ 669,99. Ugbu a, ị nwere ike were ya 616,39 dollar. Iji rite uru na ọnụahịa a, ị ga-eji ihe ndị a koodu ego: 12BGOP5TTG. Ọ bụ ezie na ị ga-adị ngwa, ebe ọ bụ nkwalite dị ụkọ. Enwere naanị nkeji 100 nke ngwaọrụ ahụ dị Na mgbakwunye, i nwere rue December 8, oge njedebe. Nwere ike ịzụta ya ebe a.
Zụta ya ebe a
OnePlus 5T (6 GB Ram - 64 GB Nchekwa) - Ego $ 50,49
Versiondị kachasị nke ngwaọrụ ahụ, ọ bụ ezie na nke a bụ isi ọ pụtaghị na ngwaọrụ ahụ ka njọ. Akwa nhọrọ ị ga-atụle, ebe nke a OnePlus 5T bụ otu n'ime smartphones kachasị mma iji kụọ ahịa n'afọ a. Na nke a, anyị nwere RAM nwere obere ikike yana nchekwa dị n'ime ala. Ọ bụ ezie na ọ na-aga n'ihu àjà ikpọ arụmọrụ na anyị nwere ohere zuru ezu maka ihe oyiyi na vidiyo anyị.
El Ọnụahịa mbụ nke ụdị a nke OnePlus 5T bụ $ 560,99. Ugbu a, ekele maka nkwalite a na Banggood ọ dị maka a ego nke $ 510,50. Iji nwee ike ịzụta ngwaọrụ na ọnụahịa a ị ga-eji nke a koodu ego: 12BGESOP5T64. N'okwu a nkwalite bụ ejedebe na nkeji 400. I nwere oge rue December 8. Ekwela ka ọ gbapụ! Ị nwere ike zụta ebe a.
Mmekọrịta ndị a na OnePlus 5T bụ nwa oge, yabụ ị ga-eme ọsọ ọsọ ma hapụ ha ka ha gbapụ. Mana, ndị a abụghị naanị onyinye nke Banggood na-enye anyị. Lọ ahịa a ma ama ama ọtụtụ puku onyinye a kwadebere maka Krismas. Ya mere ịzụ ahịa maka onyinye adịtụbeghị mfe ma dịkwa ọnụ ala. Nwere ike ịlele ihe ndị ọzọ gbasara onyinye dị na ụlọ ahịa na nke a njikọ. Kedu ihe ị chere gbasara onyinye ndị a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nweta OnePlus 5T na ego efu na Banggood
Otu esi mepụta onyinye onyinye ekeresimesi n’enweghị oke ọnụ!
Android Oreo Go: Thedị nke gam akporo maka mobiles dị ala